Booskee ayuu jecel yahay inuu ka ciyaaro Paul Pogba? Isaga ayaa kaaga jawaabayo | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Booskee ayuu jecel yahay inuu ka ciyaaro Paul Pogba? Isaga ayaa kaaga jawaabayo
Booskee ayuu jecel yahay inuu ka ciyaaro Paul Pogba? Isaga ayaa kaaga jawaabayo
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 11-10-16 1:24 PM Xiddiga qadka dhexe ee kooxda Manchester United Paul Pogba ayaa sheegay inuu ku raaxeysto marka uu ka ciyaarayo booska qadka dhexe ee weerarka.
Tababare Jose Mourinho ayaa inta badan xilli ciyaareedkaan wuxuu xiddgaan u isticmaalayey booska qadka dhexe ee daafaca, markasta oo ay kooxdiisu ciyaareyso shax ciyaareedka 4-2-3-1 ah.
Si kastaba ha ahaatee, marka uu u ciyaarayo qarankiisa France wuxuu ka ciyaaraa booska qadka dhexe ee weerarka, halka uu Blaise Matuidi ka ciyaaro booska qadka dhexe ee daafaca. Pogba ayaana dhaliyey gool cajiib ah oo uu kasoo toogtay 30 yards ciyaartii ay guusha 1-0 ah ka gaareen xulka Holland ee isreebreebka Koobka Adduunka.
Haatan 23 sanno jirkaan heerka caalami ee dalka France ayaana qirtay inuu ku riyaaqo marka uu ka ciyaarayo qadka dhexe ee weerarka, tababare Mourinho ayaana haatan laga dhursugayaa haddii uu wiilka ku fadhiya 89ka milyan oo ginni ku aamini doono booska qadka dhexe ee weerarka ee kooxdiisa Manchester United.
Wuxuu saxaafadda u sheegay ka dib kulankii ay France guusha ka gaartay Holland: “Waxaan isku deyi doonaa inaan la qabsado ka ciyaarista booska cusub ee qadka dhexe. Waxaan ahay ciyaaryahan inta badan jecel inuu weerartamo. Tababaraha ayaana iga dalbaday inaan ka ciyaaro booskaan, waxaana markasta fuliyaa amaradiisa.
“Anigoo ka ciyaaraya booska qadka dhexe ee weerarka ayaan hadana jeclahay inaan ka caawiyo ciyaartoyda kale ee kooxdeyda inay kubadda dib usoo helaan sidoo kale waxaan ka qeyb qaataa daafaca. Waxaan u ciyaaraa inta badan sidii Andrea Pirlo oo kale.
“Ujeedkeenu waa inaan usoo baxno kama dambeysta Koobka Adduunka, isla markaana aan ka shaqeyno sidii aan ku shaqeysan laheyn dhibco wanaagsan.”
Ka dib markii uu France ka caawiyey inay guulo gaarto labadeedii kulan ee isreebreebka Koobka Adduunka 2018ka, Pogba ayaa haatan kusoo laaban doona xerada tababarka Man United isagoo isku diyaarinaya kulanka ay wajahayaan Liverpool ee Isniinta ka dhici doona garoonka Anfield Road, ciyaartaas ayaana geeska Africa laga daawan doonaa 10pm.